Ny Semalt dia manolotra 3 tsara tarehy maimaim-poana amin'ny tranonkala
ary apetaho amin'ny endrika azo ampiasaina izany. Ny votoatin'ny URL iray voafaritra tsara dia azo apetraka eo amin'ny latabatra ary afaka hivoatra mandritra ny fotoana ao anaty tahiry. Amin'ny tranonkala tranonkala an-tserasera, ny angon-drakitra sy ny angon-drakitra dia azo alaina ao anatin'ireo daty vaovao na efa misy. Ny tranonkala maimaim-poana an-tserasera dia manan-danja amin'ny fanombohana satria tsy mila mandoa na inona na inona ianao. Plus, marika marobe marobe no nanao fanoloran-tena mba hitazonana ny fidirana amin'ny tranonkala misokatra ary tsy misy fiampangana.
Izy io dia malaza sy iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny tranokalan'ny Internet. Import.io dia tsara indrindra amin'ny rafitra misy rahona, ary ny mpampiasa dia tsy maintsy manampy ny tranonkala fanitarana amin'ny tranonkala mba ahafahan'ity programa ity mihetsika. Asa mahatalanjona sy azo antoka izy io izay mikaroka sy mamonjy ireo angona amin'ny endriky ny tranomboky API. Ho an'ny tranonkala tsy misy angon-drakitra, ity serivisy ity dia afaka manangana ny tahiry manokana. Izy io koa dia manolotra fahafaha-manao fitahirizana lehibe ary manipuler mora ny data. Azonao atao ny mampiditra ny angona ao amin'ny tahiry efa misy, ny kitapo efa misy, na ny angon-drakitra amin'ny fotoana. Import.io no iray amin'ny tsara indrindra amin'ny tranonkala maimaim-poana amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao, ary ny manam-pahefana mpitantana sy ny fampandrosoana dia efa niaina tao anatin'ny sehatry ny angona anaty aterineto.
Tahaka ny import.io, ny Wiki-Wiki dia tranokala maimaimpoana maimaim-poana miaraka amin'ireo safidy sy karazany am-polony. Ny kaonty maimaim-poana an-tserasera dia voafetra ho an'ny angona vitsivitsy, fa ny dikan-drakitra avo lenta na ny karama dia tsara kokoa noho ireo fitaovana hafa mitovy amin'izany. Ny ankamaroan'ny safidy, na izany aza, dia azo jerena ao amin'ny dikan-teny maimaim-poana koa. Ity orinasa ity dia nanao ny fanoloran-tena maharitra ho fanohanana ireo mpandrindra, mpandrindra ary mpanao gazety amin'ny fanomezana tolotra maimaim-poana. Ity fitaovana ity dia mahasoa ho an'ny tranokala kely sy lehibe ary mamonjy ny ankamaroan'ny rakitrao ao amin'ny format PDF. Midika izany fa tsy mila mampihatra fehezan-dalàna ianao mba hahazoana tsara indrindra amin'ity programa ity. Vao haingana, ny Scraper Wiki dia nisedra ny fivoaran-draharaha lehibe, ary ny lahatsary farany na ankehitriny dia natomboka tamin'ny safidy mahavariana sy mahavariana. Ohatra, ity fitaovana ity dia manohana ny fiteny samihafa, toy ny Ruby, PHP, ary Python. Mifanohitra amin'izany, ireo fitaovana mitovy amin'izany dia tsy manohana ireo fiteny ireo amin'ny fotoana iray. Araka izany dia afaka miteny isika fa ity fandaharana fandraketana an-tsoratra ity dia tsara lavitra noho ny vatsy hafa amin'ny tranokala maimaim-poana Source .